Wena bathwele leenketho xa ugqibe indlela yokuya. Kanye igama movie odumileyo, ungakwazi ukuya nge ezithwala, oololiwe, neminyobo. Xa kuziwa bathathe uhambo of Italy, kunjalo – kukho izibonelelo ezithile zokuhamba ngololiwe.
izihlalo beenqwelo ababedume omfutshane legroom, kwaye abavumelekanga ukuba basebenzise izixhobo zombane ngexesha isuka kunye kokwehla. Oku kuthetha ukuba moya elifutshane, na uhleli kwisitulo sezigulana isihlalo sakho encinane uninzi ukubhabha ngaphandle kweziphazamiso ezinikezelwa Smartphones yaye ubuchwepheshe, oku kwahluke mpela kwindlela yokukhwela uloliwe.
Cars badla ukunika isithuba kancinci, kodwa hambo kunokuba nzima yaye abanye abantu sigula emotweni – ngakumbi uhambo olude xa ungafuna ukufunda okanye badlale imidlalo. ukukhwela uloliwe, kwelinye icala, inikeza izihlalo ezitofotofo kunye ukhwele agudileyo – liqhawuke ngu isuka elide kunye namaxesha indiza, kwakhona amava ahlukileyo ukusuka kuloliwe.
uhambo Ukuqeqesha Italy mihle ngakumbi ke qiniseka ukuba uhamba ngeCinque Terra phakathi kweLevanto neLa Spezia okanye uthathe uhambo phantsi kunxweme olusempuma ukusuka Rimini ukuya Catania.
umdla Ukuqeqesha ride yi kakhulu ezingabizi kakhulu kunokuba kokundiza. Car irente kuba iindleko, kodwa xa ukwengeza inshorensi, irhasi, kunye nexesha (kakhulu ixesha lokuqhuba kuthetha okungakumbi nobusuku zokuhlala) uhambo lwakho Ungafumana eninzi fast. Unakho ukuthatha uloliwe ukhwele ubusuku, ngaloo ndlela uhlawulele yokuhlala kunye nezothutho kwenye.
Oololiwe umsindo ezimbalwa kakhulu carbon kuneenqwelo okanye iimoto. Ngokutsho isifundo, iimoto zikhupha kabini i ubungakanani be-CO2 Oololiwe bayayenza.
Xa kulinganiswa ukusweleka ngomkhweli ngamnye, flying ikhuseleke kakhulu kunokuba yokuqhuba. Apha kungani: kukho ithuba ngaphantsi yimpazamo eyenziwa ngumntu, kwaye kunzima kakhulu ukuba ngumqhubi wenqwelomoya kunokuba ufumane iphepha-mvume lokuqhuba. Thatha kwi iimeko zendlela akhawunti nokukhathala kwi elide ngemoto, kulula ukubona isizathu sokuba ukhetha moya ekhuselekileyo ngaphezu kokuba imoto.
Xa kuthelekiswa oololiwe, kunjalo, moya azikho kakhulu ngendlela ekhuselekileyo. Oololiwe bahamba kwingoma ngesantya esisezantsi, elithetha kukho ithuba kangako ungabonakali kuthelekiswa moya. Kwimeko yokwehla, i ngesantya esisezantsi mean umngcipheko ngaphantsi.
Umndilili akahambi lane enambuzelayo 2,500 abantu ngeyure – ngexesha umgca uloliwe eqhelekileyo kungaba 50,000 abantu ngeyure. Oku kwenza umdla Uloliwe ukhwele kakhulu ngokukhawuleza kunokuba uqhuba, ingakumbi xa kuxhomekeke kade-ihamba traffic, ukuyeka izitrato, iirobhoti Akubuya engaphephekiyo ephosakeleyo. Ngaphezu koko, umqhubi kufuneka ingqalelo endleleni, ngoko baza kukwazi ukufunda, isifundo, ubuthongo, okanye usebenze.
Airports zidla emi ngaphandle komzi, intsingiselo xa ufike, uya kusafuneka athathe imoto, ibhasi, okanye uloliwe esixekweni. Xa kufikwa ebona izinto, iindlela kumaziko isixeko zikwazi lexinene kwaye kunzima ukufikelela ngenqwelo-mafutha, ngoko ukuthatha uloliwe yenza kakhulu ingqiqo kwiindawo zenqila.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)